Waxaa jira sababo badan oo ah sababta waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad cadaadin aad files audio: ee files audio Tifaftirayaasha la iman size yar, taas oo ay ku badbaadin karto meel on your computer ama wax alla wixii qalab aad iyaga badbaadiya in. Waxa kale oo ay san yahay in loo isticmaalo internetka, sida ay noqon doonto ka hawl yar in ay sii qulquli files internetka. Haddii aad rabto in aad u soo dir qof kale, taas oo si fudud la samayn karaa adiga oo raacinaya ku ah e-mail.
Si laguugu caawiyo inaad cadaadin files audio, waxaad u baahan tahay hawadda audio sida Wondershare Video Converter . Ma ahan oo kaliya Converter video ah, laakiin sidoo kale ah Converter audio fududahay in la isticmaalo iyo hawadda. Raac tilmaan faahfaahsan hoos ku qoran si aad u barato sida loo cadaadin files audio la. Waxaad marka hore kala soo bixi kartaa waa:
1 dar files audio in this hawadda audio
Ka dib markii socda Wondershare Video, riix Add Files button on interface ugu weyn ee ay soo dhoofsadaan ka files audio aad rabto in aad cadaadin. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi file video si toos ah u furmo suuqa hoose.
2 Dooro habab kala duwan riixo
Here're inta badan laba hab oo kala duwan oo ku cadaadisaa aad files audio:
Habka 1: iyaga cadaadi galay qaabab kala duwan iyada oo ku xidhan doorashada
MP3 waa doorashada ugu fiican maadaama ay tani waa qaabka audio caadiga ah oo ay taageerayaan ugu ciyaaryahan warbaahinta iyo qalabka. Qaab riixo kale oo aad u isticmaali karto waa WMA. Waxay leedahay bitrates hoose, taas oo u wanaagsan geeyo online. Wondershare Video Converter kaa caawin kartaa inaad si fudud loogu badalo aad audio files si qaabab aad rabto. Si tan loo sameeyo, riix sawirka qaabka dhanka midig ka dibna tag Qaabka > Audio si ay u doortaan qaab wax soo saarka.
Habka 2: Kala duwaan goobaha audio
Haddii aad rabto in aad sii qaabka audio asalka ah, kaliya aad qabsato karaa goobaha cod ah sida heerka yara, kanaalada iyo heerka muunad. Guud ahaan, hoose goobaha, yar size file noqon doonaa. Si aad hoos ugu goobaha cod ah, kaliya riix Settings icon (waa yaal dhinaca midigta hoose ee suuqa hoose) oo taga si ay Size Small tab. Markaas barnaamijka si toos ah u yareyn doontaa tirada aad file maqal ah. Haddii kale, waxaad u tagi kartaa kale isha inay gacanta bedeli goobaha cod ah sida ay baahidaada.
Ka dib markii la beddelo saldhig oo aad files audio, riix OK iyo aad u soo laaban doonaa si uu furmo suuqa hoose. Halkan waxaad riixi kartaa ee Play icon inay ku eegaan natiijada wax soo saarka.
3 bilow ku cadaadisaa aad files audio
Waxa final waa inay riix badhanka badalo si ay u bilaabaan compressing aad files audio. Waxaad heli doontaa audio ee Tifaftirayaasha muddo ka dib.
> Resource > Music > Sidee ku cadaadisaa Audio Files